वामदेव गौतमले हार्ने डरले छाडेको कास्की स्व. रविन्द्रकी पत्नीको जिम्मा ! के गर्छन् मतदाता ? – Khabar Silo
पोखरा – निर्वाचन आयोगले मंसिर १४ गतेका लागि उपनिर्वाचनको मिति तोक्दै गर्दा सत्तारुढ नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) भित्र नेता वामदेव गौतमलाई कास्कीबाट प्रतिनिधिसभा सदस्य उम्मेदवार बनाउने चर्चा चल्यो ।
बर्दियामा कांग्रेस नेता सञ्जय गौतमसँग हारेका वामदेवले सांसद हुन धेरै प्रयास गरे । काठमाडौंका सांसद रामवीर मानन्धरलाई राजीनामा गराउने अवस्थासम्म पुर्‍याए । तर पार्टीले नमानेपछि उनको योजना फेल भयो ।
पूर्व मन्त्री तथा सांसद रविन्द्र अधिकारीको हेलिकप्टर दुर्घटनामा निधन भएपछि कास्कीको निर्वाचन क्षेत्र खाली थियो । जसमा वामदेव गौतमलाई उम्मेदवार बनाएर संसदमा भित्र्याउने चर्चा नेकपाभित्र चल्यो ।
उपनिर्वाचनमा उम्मेदवार बन्नुपर्ने भएपछि वामदेव गौतमले मतदाताको हिसाबकिताब गरे । जसबाट उनले निर्वाचन हारिने निष्कर्ष निकाले । सामाजिक सञ्जाल फेसबुकमा स्टेटस लेख्दै उनले निर्वाचन हार्ने ठाउँमा नलड्ने सार्वजनिक घोषणा नै गरे ।
मंसिर १४ गतेको निर्वाचन नजिकिँदै गर्दा हार्ने भएपनि नेकपाले कुनै न कुनै उम्मेदवार त बनाउनु नै पर्ने भयो । त्यसका लागि नेकपा कास्कीले स्व. रविन्द्रकी पत्नी विद्या भट्टराईलाई नै उम्मेदवार बनाउने निर्णय गरेको छ ।
विद्यालाई उम्मेदवार बनाउने नेकपा कास्कीको सर्वसम्मत निर्णयपछि मतदाताबीच चर्चा हुन थालेको छ कि जित्ने अवस्थामा वामदेवलाई उम्मेदवार बनाउन खोज्ने नेकपाले हार्नका लागि दुःखमा परेकी विद्या भट्टराईलाई किन रोज्यो ? वामदेव गौतमले चुनाव हारिने बताउँदै चुनाव नलड्ने बताएकी थिए ।
तत्कालीन मन्त्री रविन्द्र अधिकारीको निधनपछि रिक्त ठाउँमा उनकै पत्नी विद्यालाई उम्मेदवार बनाउन जिल्ला कमिटी कास्कीले पार्टी केन्द्रलाई सर्वसम्मत सिफारिस गरेको छ । नेकपा कास्कीको शुक्रबार बसेको बैठकले भट्टराईको नाम मात्रै सिफारिस गरेर पठाएको छ । पार्टी जिल्ला कमिटीले विद्याको नाम सर्वसम्मत रुपमा सिफारिस गररेको इन्चार्ज राजकाजी गुरुङले बताएका छन् ।
मन्त्री अधिकारीको २०७५ फागुन १५ गते ताप्लेजुङमा हेलिकोप्टर दुर्घटनामा निधन भएको थियो । यसअघि बुधबार मात्रै साझा पार्टीले रजनी केसीलाई उम्मेदवार बनाउने निर्णय सार्वजनिक गरेको थियो । नेपाली कांग्रेस कास्कीले १६ जनाको नाम केन्द्रमा सिफारिस गरेको छ।
यसअघिको निर्वाचनमा कम्युनिस्ट पार्टीले गरेको वाचा पूरा गर्न नसकेर बदनाम भएको बेला शोकमा परेकी विद्यालाई सहानुभूति भोट आएर चुनाव जित्न सकिने झिनो आशामा उनलाई उम्मेदवार बनाएको हुनसक्ने चर्चा कास्कीका मतदाताले गर्न थालेका छन् ।
काठमाडौं – प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेस केन्द्रीय कार्यसमितिको बैठक आज बिहीबार बस्दैछ । बैठकले आगामी मंसिर १४ गते हुने उपनिर्वाचनका लागि उम्मेदवारहरूको छनोटका लागि प्रक्रिया सुरू गर्ने भएको छ । स्थानीय तह, प्रदेशसभा र प्रतिनिधिसभा सदस्य गरी कुल ५२ स्थानका लागि उपनिर्वाचन हुँदैछ । नेपाली कांग्रेसका सहायक महामन्त्री डा. प्रकाशशरण महतले बैठकले तिहारअगाडि नै […]
२३ असार, काठमाडौं । नेपालका लागि चिनियाँ राजदूत होउ यान्छीले नेकपाका नेता झलनाथ खनालसँग भेटवार्ता गरेकी छन् । भेटवार्ताका लागि राजदूत होउ मंगलबार बिहान खनाल निवास डल्लु पुगेकी थिइन् । खनाल र राजदूत होउबीच करिब ४५ मिनेट कुराकानी भएको थियो । कुराकानीका विषय सार्वजनिक नभए पनि राजदूत होउले नेकपाभित्रको शक्ति संघर्षमा चासो राखेको बुझिएको छ […]